၂၀၁၈ မှာ မိန်းကလေးတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်များ - For her Myanmar
၂၀၁၈ မှာ မိန်းကလေးတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ်များ
ကဲ… ဘယ်သူ့ဖုန်းတွေနဲ့ တူလဲ?
ယောင်းတို့ရေ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေက နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ မရှိမဖြစ်ဆိုတာ သိကြတဲ့အတိုင်း ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း မရိုးနိုင်အောင် တစ်မျိုပြီး တစ်မျိုးကို ထုတ်နေကြတာပါ။
ဒီလို ဖုန်းမော်ဒယ်လ်တွေထဲကမှ ဒီနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီး မိန်းကလေးတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာမို့ ယောင်းတို့နဲ့ အကြိုက်တူရဲ့လားဆိုတာ စစ်ကြည့်ကြပါဦး…
၁။ Lenovo Z2 Plus
ဒီဖုန်းအမျိုးအစားကတော့ ပေးရတဲ့ဈေးထက် ပြန်ရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ သာလွန်နေတာကြောင့် မိန်းကလေးတွေအကြိုက် ဖြစ်လာတာပါ။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅လက်မနဲ့ ဘက္ထရီ 3500 mAh ပါဝင်တာမို့ တခြားအမျိုးအစားတူတွေထက် ပိုကြာကြာခံပါတယ်။ RAM ကလည်း 4GB တောင်ဆိုတော့ ထည့်ချင်တာထည့်.. အရမ်းမိုက်နေပြီပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
၂။ OnePlus 3
ဒီဖုန်းကတော့ မျက်နှာပြင် ၅.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိပြီး 16MP ရှေ့ကင်မရာကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာရှင်လေးတွေအတွက် ကွက်တိပါပဲ။ ဒီဖုန်းရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ကင်မရာက အတော်လေး ရုပ်ထွက်ကောင်းနေတာပါ။
Related Article >>> မိုဘိုင်းဖုန်းများနဲ့ ပျိုမေတို့ရဲ့ အသားအရေပြဿနာ
၃။ Oppo F1 Plus
ဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ ရှေ့ကင်မရာက အတော်လေး ကောင်းနေတာပါ။ ရှေ့ကင်မရာကို 16MP တောင် ထည့်သွင်းထားပြီး ကျောဘက်ကင်မရာကိုတော့ 13MP သာ ထည့်သွင်းပေးထားတာမို့ selfie အဓိက ဖုန်းလို့တောင် ခေါ်ဝေါ်နေကြပါတယ်။
၄။ LG G5
ဒီဖုန်းအမျိုးအစားမှာတော့ သိုလှောင်မှုပမာဏ 32GB နဲ့ RAM 4GBတောင် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့မှာပါဝင်တဲ့ 16MP နဲ့ 8MP ကင်မရာတွေက အံ့ဩဖွယ်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
၅။ Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi က အရည်အသွေးမြင့် စမတ်ဖုန်းတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ထုတ်လုပ်နေတာမို့ နာမည်ကြီးတာကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Redmi Note4က မျက်နှာပြင် ၅.၅လက်မ အရွယ်အစားရှိပြီး 4100 mAh ဘက္ထရီကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ RAM 4GB နဲ့ သိုလှောင်မှုပမာဏ 64GB တောင်ဆိုတော့ အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုပြီး သတင်းထွက်နေပါတယ်။
Related Article >>> ယောင်းတို့ ဖုန်းထဲမှာရှိသင့်တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်း (၅)မျိုး
၆။ iPhone SE
iPhone တွေထဲမှာ ဈေးအသင့်ဆုံးနဲ့ Feature ကောင်းကောင်းလေးတွေ ပါနေတာကို ရှာရင်တော့ SE အမျိုးအစားကို ရွေးရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား၊ ကင်မရာစွမ်းရည်နဲ့ Processor တွေက အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရောင်ကလည်း ၄မျိုးတောင်ပါပြီး မိန်းကလေးတွေအကြိုက် Rose Gold အရောင်လေးပါ ရရှိနိုင်မှာပါ။
ကဲ ယောင်းတို့ရေ သဘောကျတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားလေးတွေကို ပြောခဲ့ပါဦး . . .
References : trendrr , gizbot
ကဲ… ဘယျသူ့ဖုနျးတှနေဲ့ တူလဲ?
ယောငျးတို့ရေ ဒီနခေ့တျေမှာ စမတျဖုနျးတှကေ နစေ့ဉျဘဝရဲ့ မရှိမဖွဈဆိုတာ သိကွတဲ့အတိုငျး ဖုနျးကုမ်ပဏီတှကေလညျး မရိုးနိုငျအောငျ တဈမြိုပွီး တဈမြိုးကို ထုတျနကွေတာပါ။
ဒီလို ဖုနျးမျောဒယျလျတှထေဲကမှ ဒီနှဈအတှငျး ထှကျရှိခဲ့ပွီး မိနျးကလေးတှကွေား ရပေနျးစားနတေဲ့ဖုနျးအမြိုးအစားတှကေို ပွောပွပေးသှားမှာမို့ ယောငျးတို့နဲ့ အကွိုကျတူရဲ့လားဆိုတာ စဈကွညျ့ကွပါဦး…
ဒီဖုနျးအမြိုးအစားကတော့ ပေးရတဲ့ဈေးထကျ ပွနျရတဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ သာလှနျနတောကွောငျ့ မိနျးကလေးတှအေကွိုကျ ဖွဈလာတာပါ။ မကျြနှာပွငျအရှယျအစား ၅လကျမနဲ့ ဘက်ထရီ 3500 mAh ပါဝငျတာမို့ တခွားအမြိုးအစားတူတှထေကျ ပိုကွာကွာခံပါတယျ။ RAM ကလညျး 4GB တောငျဆိုတော့ ထညျ့ခငျြတာထညျ့.. အရမျးမိုကျနပွေီပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
ဒီဖုနျးကတော့ မကျြနှာပွငျ ၅.၅ လကျမအရှယျအစားရှိပွီး 16MP ရှကေ့ငျမရာကွောငျ့ ဓာတျပုံရိုကျဝါသနာရှငျလေးတှအေတှကျ ကှကျတိပါပဲ။ ဒီဖုနျးရဲ့နာမညျကွီးတဲ့အခကျြကတော့ ကငျမရာက အတျောလေး ရုပျထှကျကောငျးနတောပါ။
Related Article >>> မိုဘိုငျးဖုနျးမြားနဲ့ ပြိုမတေို့ရဲ့ အသားအရပွေဿနာ
ဒီဖုနျးရဲ့အားသာခကျြကတော့ ရှကေ့ငျမရာက အတျောလေး ကောငျးနတောပါ။ ရှကေ့ငျမရာကို 16MP တောငျ ထညျ့သှငျးထားပွီး ကြောဘကျကငျမရာကိုတော့ 13MP သာ ထညျ့သှငျးပေးထားတာမို့ selfie အဓိက ဖုနျးလို့တောငျ ချေါဝျေါနကွေပါတယျ။
ဒီဖုနျးအမြိုးအစားမှာတော့ သိုလှောငျမှုပမာဏ 32GB နဲ့ RAM 4GBတောငျ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူ့မှာပါဝငျတဲ့ 16MP နဲ့ 8MP ကငျမရာတှကေ အံ့ဩဖှယျစှမျးဆောငျရညျတှကေို ထုတျလုပျနိုငျပါတယျတဲ့။
Xiaomi က အရညျအသှေးမွငျ့ စမတျဖုနျးတှကေို ဈေးသကျသကျသာသာနဲ့ ထုတျလုပျနတောမို့ နာမညျကွီးတာကို သိကွမယျထငျပါတယျ။ Redmi Note4က မကျြနှာပွငျ ၅.၅လကျမ အရှယျအစားရှိပွီး 4100 mAh ဘက်ထရီကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ RAM 4GB နဲ့ သိုလှောငျမှုပမာဏ 64GB တောငျဆိုတော့ အရမျးမိုကျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဓာတျပုံရိုကျလို့ကောငျးတဲ့ဖုနျးဆိုပွီး သတငျးထှကျနပေါတယျ။
Related Article >>> ယောငျးတို့ ဖုနျးထဲမှာရှိသငျ့တဲ့ အကျပလီကေးရှငျး (၅)မြိုး
iPhone တှထေဲမှာ ဈေးအသငျ့ဆုံးနဲ့ Feature ကောငျးကောငျးလေးတှေ ပါနတောကို ရှာရငျတော့ SE အမြိုးအစားကို ရှေးရမှာပါ။ သူ့ရဲ့ မကျြနှာပွငျအမြိုးအစား၊ ကငျမရာစှမျးရညျနဲ့ Processor တှကေ အရမျးအဆငျပွပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရောငျကလညျး ၄မြိုးတောငျပါပွီး မိနျးကလေးတှအေကွိုကျ Rose Gold အရောငျလေးပါ ရရှိနိုငျမှာပါ။
ကဲ ယောငျးတို့ရေ သဘောကတြဲ့ ဖုနျးအမြိုးအစားလေးတှကေို ပွောခဲ့ပါဦး . . .
Tags: brands, Choice, Knowledge, Phone, popular, technology
Scarlett November 28, 2018